ပါတနာ ပြောင်းချင်ပါသည် – FBS
ပူးတွဲမှု နှင့် ခွဲခြားမှု
ဖောက်သည်ကို ဘာကြောင့် ပါတနာထံမှ ဖြုတ်ရသလဲ?
ကျွန်ုပ်အကောင့်ကို ပါတနာထံမှ ဖြုတ်ချင်သည်
ပါတနာအောက်မှာ မှတ်ပုံတင်ထားသောဖောက်သည် အရောင်းအဝယ်အကောင့်တစ်ခုစီအတွက် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဆက်အကျိုးဆောင်ပြောင်းခွင့်ရှိသည်။ ဖောက်သည်အနေဖြင့် အရောင်းအဝယ်အကောင့်တစ်ခုစီအတွက် ပါတနာကို တစ်ကြိမ်သာပြောင်းနိုင်သည်။ အောင်မြင်စွာ ပြန်တွဲဖက်ရန်၊ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်:
ဖောက်သည်တွင် အတည်ပြုပြီးသား ပါစင်နယ်ဧရိယာ ရှိရမည်;
ဖောက်သည် ပြန်ချိတ်ဆက်လိုသော အကောင့်တွင် ယခင်ကပြုလုပ်ထားသော အရောင်းအဝယ်အော်ဒါများမရှိရ;
ဖောက်သည် ပြန်တွဲလိုသော အကောင့်တွင် ယခင်က အရောင်းအဝယ်အော်ဒါများ ရှိထားပါက၊ အရောင်းအဝယ်အကောင့် ဖွင့်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ကြာအတွင်း ပြီးမြောက်ရမည်;
မိတ်ဆက်အကျိုးဆောင် (IB)သည် ဖောက်သည်မှ သီးခြားအရောင်းအဝယ်အကောင့် မဖွင့်ခင် ၎င်းတို့၏ ပါတနာအကောင့်အား ဖွင့်ထားရမည်။
အရေးကြီးသည်! ကျေးဇူးပြု၍ ပါတနာပြန်တွဲခြင်းတွင်၊ ၁၀၀% စရံငွေအပိုဆုသည် ပြန်တွဲသောအကောင့်အတွက် အလိုလျောက်ပယ်ပျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
ပါတနာအသစ် (IB)ထံ သင့်အကောင့်ရည်ညွှန်းရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ရိုးရှင်းသောအဆင့်များ လိုက်နာပါ:
ဒက်ရှ်ဘုတ်တွင် သင်ပြန်ချိတ်လိုသော အရောင်းအဝယ်အကောင့်ကိုနှိပ်ပါ
ဆက်တင်ရှိ "ပါတနာပူးတွဲစာ" ကဏ္ဍကိုရှာပြီး၊ "ဖြုတ်ပါ" ကိုနှိပ်ပါ:
ပေါ်လာသော ဝင်းဒိုးတွင်၊ "ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြုတ်ပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ယခင်ပါတနာထံမှဖြုတ်ဖို့ အတည်ပြုပေးရန်လိုပါသည်:
ထို့နောက် IBအသစ်၏ IDရိုက်ထည့်ရန် "တွဲပါ" ခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်ပါ:
ပေါ်လာသော ဝင်းဒိုးတွင်၊ ပါတနာ၏ IDနံပါတ် ထည့်ရန်လိုပြီး၊ "တွဲပါ"ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ်ထပ်နှိပ်ပါ။
စည်းကမ်းအားလုံးကိုက်ညီပါက၊ အကောင့်အား အခြား IBနှင့် ချက်ချင်းပြန်ချိတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။